विदेशी सिइओको हातमा एयर इण्डियाको कमान, १०० दिनमा कायापलट गर्ने टाटाको लक्ष्य « Bizkhabar Online
6 December, 2021 1:12 pm
काठमाडौं । टाटा समूहले एयर इन्डियालाई नयाँ उचाइ दिने तयारी सुरु गरेको छ। टाटा समूह, जसले भर्खरै भारी ऋणमा डुबेको सरकारी एयरलाइन कम्पनी एयर इन्डियालाई किनेको थियो । उसले जनवरी २०२२ मा यसको लगाम सम्हाल्ने सम्भावना छ। एयर इन्डियाको टर्नअराउन्डको लागि १०० दिनको खाका तयार भइरहेको छ। टाटा समूहले एयर इन्डियाको सीईओका लागि नाम छनोट गरेको र अमेरिकाको डेल्टा एयरलाइन्सका पूर्व अध्यक्ष फ्रेड रीडको नाम अगाडि रहेको विश्वास गरिएको छ ।
१०० दिने योजनामा ​​यात्रु र कल सेन्टरहरू सम्बन्धी गुनासोहरूको समाधानका साथै एयर इन्डियाको समयमै कार्यसम्पादनमा सुधार समावेश छ। १०० दिने योजनामा आधारभूत सेवाको स्तरमा सुधार गर्ने लक्ष्य राखिएको स्रोतले जनाएको छ । पहिलो १०० दिनमा सबै पूर्ण रूपमा ठीक गर्न नसके पनि सुधार गर्न सकिने अवधारणमा काम भइरहेको छ। समयमा उडान नहुने र यात्रुको गुनासो सम्बोधन नहुने परिपाटीको अन्त्यसँगै सुधारको काम थालनी भएको देखिने बताइएको छ।
के भन्छ कम्पनी ?
टाटा समूहले यस विषयमा टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेको छ। कम्पनीले इमेलको जवाफमा एयर इण्डियाको सेयर खरिद कारोबार हाल चलिरहेको बताएको छ। ‘हामी यो प्रक्रिया पूरा गर्न भारत सरकारसँग मिलेर काम गरिरहेका छौं। हामी सम्झौता पूरा नभएसम्म कुनै पनि अनुमानमा टिप्पणी गर्नबाट टाढा रहनेछौं’–कम्पनीले भनेको छ ।
टाटा समूहको ट्यालेस प्रालिले एयर इन्डिया र एयर इन्डिया एक्सप्रेसको सम्पूर्ण शेयर र ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ कम्पनी एआईएसएटीएसको ५० प्रतिशत सेयर किन्न सफलता पाएको थियो । सरकारले जनवरीको तेस्रो साता एयर इन्डिया टाटा समूहलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ । अक्टोबरमा नागरिक उड्डयन महानिर्देशनालयले जारी गरेको तथ्याङ्कअनुसार यात्रु गुनासोका आधारमा एयर इन्डिया तेस्रो नम्बरमा रहेको छ ।
को हुन् फ्रेड रीड ?
स्रोतका अनुसार टाटा समूहले एयर इन्डियाका लागि सीईओको नाम सर्टलिस्ट गरेको छ र रिड पहिलो रोजाइमा छन् । टाटा समूहको भिस्टारा र एयरएसिया इन्डियामा हिस्सेदारी छ, तर समूह आफैंसँग अझै उड्डयन अनुभव छैन। एक स्रोतले भन्यो कि यो स्पष्ट छ कि एक विदेशी सीईओ एयर इण्डिया को लागी ल्याइने छ र यो उनको भविष्यको जिम्मेवारी हुनेछ। यस पदका लागि रिडको नाम सर्टलिस्ट गरिएको छ।
किन विदेशी सीईओ ?
अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा बस्ने रीड नागरिक उड्डयन उद्योगका अनुभवी हुन्। उनी डेल्टाका अध्यक्ष भइसकेका छन् र भर्जिन अमेरिकाको सुरुवातको समयमा यसको सीईओ थिए। हाल एयर बिएनबीसँग सम्बन्धित साथै सर्फ एयर मोबिलिटीको अध्यक्ष छन्। अर्को चरणमा टाटा समूहले एयर एसिया इण्डियाको १६ प्रतिशत सेयर किन्ने तयारीमा छ। यो काम एयर इन्डियाको हस्तान्तरण अघि नै हुनसक्ने बताइएको छ ।
टाटा समूहले टालेस लिमिटेडको नाममा एयर इन्डियाको लागि लिलामीमा बोली लगाएको थियो। यसमार्फत टाटा सन्सले एयर इन्डियाको लागि सफल बोली लगाएको थियो । एयर इन्डिया टाटा एयरलाइन्सको रूपमा १९३२ मा स्थापित भएको थियो र पछि सरकारले राष्ट्रियकरण गरेको थियो । तर, विभिन्न कारणले एर इण्डिया टाट पल्टिएपछि सरकारले विगत केही वर्षदेखि बेच्ने प्रयास गरिरहेको थियो । अन्ततः टाटा सन्सको रूपमा टाटाले एयरलाइन खरीद गरेर पुनः आफ्नो बनाएको हो । नवभारत टाइम्सबाट